पद्मरत्न तुलाधरः वाम आन्दोलनदेखि पहिचानको मुद्दासम्म - Tamang Online
पद्मरत्न तुलाधरः वाम आन्दोलनदेखि पहिचानको मुद्दासम्म
वरिष्ठ वामपन्थी नेता तथा मानवअधिकारवादी अभियन्ता पद्मरत्न तुलाधरको आइतबार निधन भएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उदाहरणीय योगदान पुर्‍याएका तुलाधरसँग भदौमा अन्तर्वार्ता लिएको थियो । तुलाधरसँगको कुराकानीका आधारमा त्यसबेला प्रकाशित यो सामाग्री सान्दर्भिक हुने ठानेर यहाँ पुन: प्रकाशित गरिएको छ- सं )
जनपक्षीय उम्मेदवार बनेर ०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित पद्मरत्न तुलाधर ०५१ सालमा एमालेको ९ महिने सरकारमा श्रम तथा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) लाई शान्ति वार्तामा ल्याउने सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका उनी ०६० को दशकसम्म पनि नेपाली राजनीतिका ‘हट केक’ थिए ।
नेपाल भाषा मंकाः खलः को अध्यक्ष बनेर भाषिक आन्दोलनमा लागेका काठमाडौंका रैथाने तुलाधर चालीसको दशकअघि भाषिक अधिकारकर्मीका रुपमा परिचित थिए । पछि एमाले नजिक भए । त्यसपछि माओवादीनिकट भनेर चिनिए । त्यससँगै उनले पहिचानवादी आन्दोलनका अभियन्ताको दहि्रलो पहिचान बनाए ।
आधिकारिक रुपमा कुनै पनि दलको सदस्य नबनेका उनी लोकतान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक लागे । ०४६ सालमा उनी पञ्चायतविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनका लागि कांग्रेस र बाममोर्चालाई एक ठाउँमा ल्याउने सूत्रधारमध्ये एक थिए ।
शान्त, सरल र मिजासिला स्वाभावका तुलाधर मञ्चमा भने निकै चर्को भाषण गर्छन् । भाषणकै क्रममा उनी पटक-पटक भावुक बन्छन् । यति भावुक बन्छन् कि, कतिपय बेलामा उनी भाषण गर्दागर्दै रुन्छन् पनि । भाषणकै कारण तुलाधर ०५१ सालमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका बेला ‘गाई विवाद’ मा मुछिए ।
भदौ ३० गते राजधानीमा तुलाधारको नागरिक अभिनन्दन हुँदैछ । यसबाहेक पछिल्लोपटक ०७२ सालमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको नेतृत्व गरेका तुलाधर केही वर्षयता सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन छाडेका छन् । आफैं अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय आन्दोलनले गत महिना बानेश्वरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनी स्वास्थ्यकै कारण सहभागी हुन सकेनन् ।
अनलाइनखबरकर्मीसँगको भेटमा तुलाधरले हिँडडुल गर्न नसके पनि आफू अस्वस्थ नभएको बताए । लाजिम्पाटस्थित निवासमा तुलाधरले पञ्चायतकालीन संघर्ष, एमालेलाई पुर्‍याएको योगदान, गाईकाण्डको प्रशंग अनि सरकार-माओवादी वार्ताका गोप्य प्रशंगहरु र शान्ति प्रक्रियापछिको राजनीतिक घटनाक्रमको स्मरण गरे ।
म यसरी वामपन्थी भएँ
मेरा बुबा ल्हासामा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो । त्यहाँ चाइनिजहरू आएपछि निजी व्यापार बन्द भयो । त्यसपछि बुबा नेपाल फर्कनुभयो । बुबाले चीनको खुब प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो । बुबा मात्रै होइन काका, दाजुहरूले पनि चाइनजिहरू यस्तो उस्तो भनेर मीठामीठा कुरा गर्थे । यस्तो माहोलले कम्युनिष्ट व्यवस्था भएको देश यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने छाप बस्यो |
तिब्बतको कुरा बुझ्न पुष्पलाल श्रेष्ठ हाम्रो घरमा आउनुहुन्थ्यो । खासगरी चाइनिजहरूले तिब्बतमा आएपछि के-के गरे भन्नेमा उहाँको चासो देखिन्थ्यो । म बुबासँग बस्ने र पुष्पलालको कुरा सुन्ने गर्थें । बुबा रेडियो खुब सुन्नुहुन्थ्यो । दाजु र म बुबासँगै रेडियो सुन्नेे र पत्रपत्रिका पढ्ने गथ्र्यौं ।
१२-१३ वर्षको हुँदा म र बहिनी अमृतलक्ष्मी दुर्गालाल श्रेष्ठसँग पढ्न असन जान्थ्यौं । दुर्गालालसँग दाजुको जस्तो, गुरुको जस्तो सम्बन्ध थियो । त्यतिबेला उहाँले सडक नाटक लेख्नुहुन्थ्यो । दुर्गालाल दाइ आफू जहाँ-जहाँ जानुहुन्थ्यो, मलाई पनि साथमा लैजानुहुन्थ्यो । दुर्गालाल दाइका कारणले पनि ममा वामपन्थी झुकाव बढेजस्तो लाग्छ । २०१७ सालपछि भने पुष्पलाल श्रेष्ठ भूमिगत हुनुभयो ।
कमलाक्षी, भोटाहिटीमा निरञ्जन गोविन्द वैद्य (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक संस्थापक) को पुस्तक पसल थियो । हामी त्यहाँ थएर पुस्तक पढ्थ्यौं । वामपन्थी झुकाव हुनेहरूका लागि त्यहाँ किताब किन्नु एक किसिमको फेशनजस्तै थियो । सस्तो-सस्तो पुस्तक किन्थ्यौं । चाइना टुडे, पिपुल्स रिभ्यू पढ्थ्यौं ।
विसं. २०१४ सालमा त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्ने बेलामा निर्मल लामा, रुपचन्द्र विष्टहरू मेरा सहपाठी थिए । कुनै पिरियड खाली भयो कि उनीहरु चउरमा बसेर बामपन्थी गफ दिइहाल्थे । यो माहोलले पनि मलाई वामपन्थी बनाउन मद्दत गर्‍यो ।
केपी ओली र विद्या भण्डारीको क्षेत्रमा भाषण गरें
पछि भाषा आन्दोलनमा पनि लागियो । म नेपाल भाषा मंकाः खलः को अध्यक्ष भएँ । त्यतिबेला साहित्य सम्मेलन हुने गर्दथ्यो । म कीर्तिपुर, बनेपासम्म साइकल चढेर चिठी बाँड्न जान्थें । सुदर्शन भन्ते लगायतका भाषिक कार्यक्रमका वक्ताहरू विभिन्न कारणले सम्मेलनमा आउन सक्नुभएन । त्यहीबेला म नाई भन्न नजान्ने मान्छेलाई साथीहरूले वक्ताका रुपमा अघि सारे । नेपाल भाषामा दुई-तीन ठाउँमा बोलेपछि भाषण गर्न पनि सिकें । त्यसले एक किसिमको आत्मबल मिल्यो ।
२०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो । म कुनै विद्यार्थी संगठनको सदस्य थिइनँ । तर, सबैको जुलुसमा जान्थेँ । इन्कलाब भन्न होइन जिन्दावाद मात्रै भन्न । नाराको लिड गर्ने होइन कि पछिपछि लागेर स्वरै सुक्ने गरी जिन्दावाद भनेर कराउँथें ।
विद्यार्थी, राजनीति, मजदुर जुनसुकै जुलुसमा पुग्थेँ । पछिपछि त मनमोहन अधिकारी, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, माधव नेपालसँग जुलुसमा सँगै हिँड्थ्यौं । साँच्चै भन्ने हो भने म अहिले पनि सडक आन्दोलनमै छुजस्तो लाग्छ । कहिले भाषा आन्दोलनको विषयमा त कहिले आदिवासी जनजातिको आन्दोलनका लागि सडकमा पुगिरहेको हुन्छु ।
जनमत संग्रहमा पनि म एक दुई ठाउँमा वक्ता भएर गएको थिएँ । अनेरास्ववियु पाँचांैको राष्ट्रिय सम्मेलन मित्रपार्क, चावहिलमा भएको थियो । त्यतिबेला प्रेस सञ्चालन गरेर बसेको थिएँ । त्यहीताका रघुजी पन्तसँग सम्पर्क भयो । विद्यार्थी सम्मेलन हुँदा मलाई वक्ताको रुपमा आमन्त्रण गरे । अब कस्तो फसाद, मैले नेपालीमा कहिल्यै भाषण नगरेको । म बोल्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासै थिएन ।
नाई भन्दाभन्दै पनि बोल्नैपर्ने भयो । शम्भुराम श्रेष्ठ र मलाई अतिथि वक्ता बनाएका थिए । मैले पहिलोपटक नेपाली भाषामा भाषण गरेको त्यहीँ नै हो । भाषणमा तालीका ताली आयो ।
त्यसपछि त शिक्षक आन्दोलनमा पनि बोलाउन थालियो । ०४८ सालमा मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, साहना प्रधान, केपी शर्मा ओली र उपनिर्वाचनमा विद्या भण्डारीको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर भाषण गरेँ । ओलीजीलाई जिताउन झापाको दमकमा गएर पनि भाषण गरेँ ।
सूर्य चिह्नमा दाबी
विसं. ०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापस) मा उम्मेदवारी दिएको थिएँ । गोरखापत्रमा नाम प्रकाशित भएपछि असनमा गणेशमान सिंहसँग भेट भयो । उनले के गरेको पद्म भाइ भन्दै, अहिले चुनावमा उठ्नुहुँदैन भने । अर्को एक जना मेरो काकी पर्नेले पनि पद्म तिमी पनि पञ्च हुन गएको ? भनेपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएँ ।
त्यतिबेला पञ्चायतमा जानु भनेको भ्रष्टाचार गर्न जानु हो भन्ने छाप थियो । हुन पनि कांग्रेस-कम्युनिष्टबाट गएर मन्त्री बनेकाहरू पनि पतीत भइरहेका थिए ।
विसं. ०४३ सालमा नेकपा मालेले निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने नीति लियो । गणेशमान सिंह, ऋषिकेश शाह, डिल्लीरमण रेग्मी, टंकप्रसाद आचार्यसँग सल्लाह गर्न गएँ । गणेशमानजीले ऋषिकेश शाह र रुपचन्द्र विष्ट जस्तै हुने हो भने जाँदा हुन्छ भने । उनीहरूको भनाइको अर्थ रापंस भए पनि पञ्च नहुने र अडानमा बस्ने भन्ने थियो ।
मैले पञ्च नबन्ने शर्तमा जनपक्षीय उम्मेदवार बन्ने निर्णय गरें । मालेका कार्यकर्ताहरू मेरै पक्षमा लागेका थिए । कांग्रेसको पनि समर्थन मलाई नै थियो । खुलेआम प्रजातन्त्रको पक्षमा भोट मागें । पञ्चायती व्यवस्था होइन, अव्यवस्था हो भनेर भाषण गरेँ । ८२ हजार मत ल्याएर जितेँ पनि ।
त्यतिबेला मेरो चुनाव चिह्न सूर्य थियो । चुनावपछि सूर्य चिह्न पनि लोकपि्रय भयो, म पनि नेकपा मालेसँग नजिक भएँ ।
त्यसबेला माधव नेपाल साइकल चढेर मेरो घरमा आउनुहुन्थ्यो । त्यहीँ बसेर घण्टौं कुरा गर्थेँ । उहाँ ट्रान्जिस्टर बोकेर आउनुहुन्थ्यो । हाम्रो कुरा अरुले नसुनोस् भनेर ट्रान्जिस्टर बजाउँदै कुरा गर्थ्यौं ।
जीवराज आश्रित पनि मलाई भेट्न बालकुमारीको प्रेसमा आइराख्नुहुन्थ्यो । बाईन्डिङ कोठामा घण्टौं बसेर कुरा गर्थ्यौं । मालेका अरु नेताहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो ।
सूर्य चिह्न ०४६ अघि नै लोकप्रिय भइसकेको थियो । नेकपा एमालेले त्यही चिह्न रोज्यो । म त कुनै पार्टीमा नभएको मान्छे । म स्वतन्त्र हुँ, सूर्य मेरो स्वतन्त्र चिह्न हो भन्दा पनि कोही मानेन । एमालेले त्यही चिह्न दिएर मलाई टिकट दिन लागेको थियो । साथीहरूले पनि सूर्य चिह्न एमालेको भन्दा पनि हाम्रै हो । चुनाव लड्न जानु भन्थे ।
अहिलेसम्म पनि त्यो चिह्नको विषयमा विवाद छ । नेकपाले पनि त्यही चिह्न रोजेको छ । मैले सूर्य चिह्नबाट ०४३, ०४८ र ०५१ मा चुनाव जितेँ ।
सूर्य चिह्नबाट जितेर गए पनि म संसदमा स्वतन्त्र सांसदकै रुपमा प्रस्तुत भएँ । बजेट प्रस्तुत हुँदा एमाले र कांग्रेस दुबैको आलोचना गथेर्ं । एमालेको आलोचना गर्दा कांग्रेसहरू हात मिलाएर हामीले बोल्न नसकेको कुरा दाइले बोल्नुभयो भन्न आउँथे ।
‘गाईकाण्ड’ ले गाह्रो !
म स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला ‘गाईकाण्ड’ भनेर एउटा विषय उचाले । म मानवअधिकारवादी पनि हुँ । म संगठितरुपमै मावनअधिकारवादी संगठनमा आवद्ध हुँ । मन्त्री भएका बेलामा बारा जिल्लामा हाम्रो अधिवेशन भएको थियो ।
त्यहाँ बोल्दा मैले राजनीतिक अधिकार प्राप्त भयो, सामाजिक, सांस्कृतिकरुपमा भने मानवअधिकार प्राप्त भइसकेको छैन भनें । उदाहरणका लागि मुस्लिम समुदाय वा गाईको मासु खाने जनजाति समुदाय आएर, हामीले आ-आफ्नो क्षेत्रमा गाईको मासु खान पाउनु मानवअधिकार हो कि होइन भनेर सोध्यो भने मैले मानवअधिकारकर्मीको नाताले पाउनुपर्छ भन्छु भनें ।
त्यो भनाइ के खान हुन्छ वा हुँदैन भन्नेसँग होइन, मानवअधिकार के हो भन्ने कुरा बुझाउनका लागि थियो । त्यहाँ अगाडि एकजना कांग्रेसका पत्रकार रहेछन् । तिनले आफ्नो पत्रिकामा पद्मरत्नले गाई काट्नुपर्छ भन्यो भनेर लेख्यो ।
कसैले गाई काटेको प्रसँग आयो कि पद्मरत्नले पठाएको हो भन्थे । स्वास्थ्य मन्त्री भएर जिल्ला अस्पतालमा जाँदा मेराविरुद्ध नारा लगाउँथे । मेरो विरुद्धमा कोणसभा गरिन्थ्यो । भाषण सकिएपछि वक्ताले जय नेपाल भन्थे । त्यसबाट विरोध गर्नेहरू कांग्रेस थिए भन्ने स्वतः सिद्ध हुन्थ्यो ।
एमाले मात्रै होइन, म कुनै पार्टीमा कहिल्यै सदस्य भइनँ । मदन भण्डारीको अवसानपछि एमालेका जम्मै नेताहरू आएर पार्टीमा आउनुपर्‍यो भने । तपाईले जे पद चाहनुहुन्छ, त्यो पद दिन तयार छौं भन्थे । मैले पद चाहिन्छ त भनिनँ । तर, एमाले विभाजित नहोस् भनेर मेरो घरको तलको कोठामा पटक-पटक मिटिङ राखे । दुबै पक्षमा नेताहरुलाई राखेर कुरा गरेँ । तर, सफल भइनँ ।
महाकाली सन्धिको सम्बन्धमा विभाजित हुँदा मैले सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेको थिएँ । त्यसकारण म बामदेव गौतमहरूको साइडमा बसेँ । त्यसपछि मालेको तारा चिह्न लिएर चुनावमा उठें र हारेँ ।
त्यसको मलाई एउटा फाइदा भयो । जसले पनि मकां खलःको, नेवारको भोटले जितेको, साम्प्रदायिक भन्थे । मालेबाट हारेपछि मैले नेवारको भोटले जितेको भए किन हारें त ? भनेर प्रश्न गर्न पाएँ । नेवारको भोटले जितेको भए त अहिले पनि जित्नुपर्ने भनंे । त्यसअघिका तीनवटा चुनावमा मैले पाएको भोट राजनीतिक नै थियो भन्ने पुष्टि भयो ।
शेरबहादुरजीले सरी भन्नुपर्थ्यो
माओवादीले ०५२ मा हतियार उठायो । मेरो सबैसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । म संसदमा थिएँ । बाबुरामजीसँग पहिलेदेखि नै परिचित थिएँ । मेरो शान्त र नरम स्वभाव भन्छन्, तर म जहिल्यै पनि क्रान्तिको पक्षमा उभिएँ । जसले रेडिकल विचार राख्छ, मानसिकरुपमै उनीहरुको पक्षमा लाग्नेे स्वाभाव छ । त्यसैले होला, माओवादीको समर्थकजस्तो देखिएको ।
जनयुद्ध शुरु भएको एक/दुई वर्षमा उनीहरूले मलाई सम्पर्क गर्न थाले । प्रचण्डजीले बारम्बार फोन गर्नुहुन्थ्यो । घरको फोन ट्याप हुन्छ भनेपछि बाहिर गएर फोन गर्थेँ । माओवादीलाई भेट्न दिल्ली, रक्सौल, लखनऊ कहाँ गइनँ ?
माओवादी नेता दिनेश शर्मा एक दिन प्रचण्डलाई लिएर मेरो यही घरमा आउनुभयो । हामी पुरै आतंकित भयौं । प्रचण्डले रोल्पाबाट फर्केको, दाइको घरमा नपसी कसरी जाने भनेर आएको भने । निस्कने बेलामा त उनीहरू पनि आत्तिएछन् । एउटा ट्याक्सी लिएर गए । बाहिर मान्छेहरू थिए । तर, प्रचण्डलाई प्रहरीले चिन्दैनथे ।
श्रीलंकामा एउटा कार्यक्रममा गएका बेलामा दमननाथ ढुंगानाजीले एकपटक प्रचण्डलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भने । त्यसपछि उहाँलाई भेट्टाउन दिल्ली लिएर गएँ ।
लगातार पहल गरेपछि माओवादी र सरकारबीच पहिलो वार्ता भयो । तर, वार्ता असफल भयो । त्यसको एक/दुई दिनमै म दिल्ली जानुपर्ने थियो । ठूलो छोरालाई लिएर त्रिभुवन विमानस्थल पुगेँ । बोर्डिङ पास लिएर बसिरहेको थिएँ । एकजना प्रहरी आएर सलाम गर्‍यो । सरलाई डीएसपी साहेबले डाक्नुभएको छ भनेर पक्राउ गरे । त्यसपछि हनुमान ढोका खोरमा लगेर कोचिदिए ।
त्यतिखेर शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै जानकारीमा म वार्ताको काममा सक्रिय भएको थिएँ । त्यो घटनाभन्दा केही दिन पहिला शेरबहादुरजीसँग दमननाथजी र मेरो भेट भएको थियो । दमननाथजीले मेरो उपचारमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्‍यो समेत भन्नुभएको थियो । तर, मैले सहयोग चाहिँदैन भनें । म मुटुको विरामी उपचारका लागि दिल्ली जान लाग्दा हनुमान ढोका खोरमा पुँगे ।
त्यो खोरमा म धेरैचोटि पुगेको थिएँ । तर, त्यसपटक साँच्चै चित्त दुख्यो । पञ्चायत फेरि फर्केछ जस्तो लाग्यो । एउटा सानो झ्याल मात्रै भएको अँध्यारो कोठामा राख्दा अचम्मित भएको थिएँ । देशको शान्ति प्रक्रियामा सहभागी हुँदा म त्यसरी खोरमा जाकिएको थिएँ । धन्न छोरो साथमा भएकाले दमननाथजी र गौरी प्रधानलाई फोन गरेछ र म छुटेँ ।
त्यतिबेला शान्ति प्रक्रियाका लागि शेरबहादुरजीलाई मैलेजति कसले सहयोग गर्‍यो होला ? मेरो एक मात्र उद्देश्य शान्ति कायम होस् भन्ने थियो । पछि दमनजीले सोध्दा उहाँ भाग्न लाग्नुभएकोले प्रहरीले समातेको रे भनेछन् । जबकि मेरो उपचारको विषयमा शेरबहादुरजी पूरापूर जानकार हुनुहुन्थ्यो । म भाग्नुपर्ने कारणै छैन भन्ने पनि उहाँलाई थाहा थियो ।
यत्तिका वर्ष भयो, शेरबहादुरजीले मलाई अहिलेसम्म ‘सरी’ भन्नुभएको छैन ।
पद्मरत्न नै प्रचण्ड !
जिल्ला-जिल्लामा जाँदा मलाई निकै नमीठो अनुभव हुन्थ्यो । हामी वार्ता होस् भनेर निस्वार्थ लागिरहेका हुन्थ्यौं । तर सेना, प्रहरीले हामीले सुन्ने गरी ‘यिनीहरू केको मानवअधिकारवादी, यिनीहरू माओवादी हुन, दुबैलाई सिध्याउनुपर्छ’ भन्थे । दमनजी र म सुनेको नसुन्या जस्तो गरेर बस्थ्यौं ।
म मालेको तारा चिन्ह लिएर चुनावमा उठेका बेला खिचेको तस्वीर थियो एउटा । त्यसैलाई देखाएर कतिपयले प्रचण्ड भनेकै पद्मरत्न तुलाधर हो पनि भने । टाइम्स अफ इन्डिया, द स्टेसम्यानसीप लगायतका दैनिकले मेरै तस्वीरलाई प्रचण्ड भनेर प्रकाशित गरे । जी न्यूजले पनि ०६२ सालमा ओसामा बिन लादेनभन्दा सर्वाधिक खोजी गरिएको प्रचण्ड भनेर मेरै फोटो देखायो ।
प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरै वार्ता गरिरहेका हुन्थ्यौं । तर, सरकारले आधिकारिक पत्र केही दिएको थिएन ।
दोस्रो वार्ता असफल भएपछि राजाका पालामा गृहमन्त्री कमल थापाले हामीलाई तपाईहरू सहजकर्ता रहनुभएन भनेर पत्र दिए । ‘नियुक्त गर्दा पत्र दिनुनपर्ने, हटाउँदा पत्र दिनुपर्ने’ भनेर ठट्टा पनि गर्थ्यौं ।
त्यतिबेला वार्ताको विषयमा गम्भीरता थिएन । कतिसम्म भने सरकार र माओवादी दुबै पक्षसँग मागपत्र लिखितरुपमा प्रस्तुत गर्ने अवस्था समेत थिएन । वार्ताको विषयमा छलफल गरेको बैठकमा नेताहरू पालैपालो चुनावी भाषण गरेर बस्थे ।
दमननाथ ढुंगाना, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, कृष्णध्वज अधिकारी र म सहजकर्ताका रुपमा लामो समय सक्रिय थियौं । प्रचण्डजी संसारमा कम्युनिष्टहरूले शुरु गरेका सशस्त्र क्रान्ति सफल पनि भएका छन्, असफल पनि । लाखौं लाखकोे ज्यान जाने गरी नरसंहार पनि भएका छन् भन्थे । शान्तिपूर्वक समाधान निस्कन्छ भने हामी वार्ताबाट निकास निकाल्न तयार छौं भनेका थिए । प्रचण्डको त्यही भनाइकै आधारमा म कन्भिन्स भएको थिएँ कि उनीहरु वार्तामा आउन तयार छन् ।
त्यसबेला माओवादीबाट अपहरण भयो भनेर परिवारका सदस्यहरु मेरो घरमा आउँथे । चन्दा आतंक भयो भन्ने गुनासो लिएर पनि आउँथे । डीएसपी ठूले राईको परिवारले पनि आएर मलाई भेट्नुभयो । प्रचण्डको फोन आयो भने रिहाइ गर्न भन्नुहोला भन्न आएका थिए । राजा वीरेन्द्रको पूर्व प्रेस सेक्रेटरीलाई पनि छोड्नू भनिदिएँ । मैले भनेको कुरा प्रचण्डले नाइँ गर्दैनथे ।
गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल सुरक्षा गार्डविनै….
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएकाबेला रामचन्द्र पौडेलले माओवादीलाई भेट्न खोजिरहनुभएको थियो । माओवादीले दिनेश शर्मा लगायतका वेपत्ता नेताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको थियो ।
रामचन्द्रजीको आग्रहमा प्रचण्डजीलाई फोन गरेँ । माओवादीले काठमाडौंमा उपलब्ध आफ्ना नेता रविन्द्र श्रेष्ठलाई वार्ताको जिम्मेवारी दियो ।
मैले व्यक्ति र स्थान नतोकेर वार्ता हुँदैछ भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमलाई बताएँ । त्यसपछि बाबुरामजीले वार्ता कि रोक्नुपर्‍यो, होइन भने सार्नुपर्‍यो भनेर फोन गर्नुभयो । फेरि प्रचण्डले पनि फोन गरेर वार्ता रोक्नु पर्‍यो भने । रविन्द्रको सुरक्षाको कुरा पनि उठाए । मैले त्यसको पनि जिम्मा लिन्छु भनें ।
पाटनमा एकजना साथीको घरमा वार्ता भयो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामचन्द्रजी विनासुरक्षा गार्ड त्यहाँ जानुभएको थियो । उहाँकै छोराले हाँकेको गाडीमा बसेर । रविन्द्र सडकमा यात्रुजसरी उभिइरहेका थिए, गृहमन्त्री पौडेल चढेको गाडीले पिकअप गरेर वार्तास्थल लगिएको थियो ।
डीभी पीडितलाई साथ दिँदा…
भाषा आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा लागेकाले मलाई कतिपयले साम्प्रदायिक पनि भन्ने गर्छन् । तर, वास्तविकता के हो भने म अधिकारवादी जुनसुकै आन्दोलनमा समाहित हुन्छु । सडकमै पुगिरहेको हुन्छु ।
मानवअधिकार, नागरिक आन्दोलन, लोकतन्त्र जोगाउने आन्दोलन, महिला, दलित आन्दोलन सबैमा सहभागी हुन्छु । दलित आन्दोलन भनेपछि त छुटाउँदै छुटाउँदिनँ ।
एकपटक नेकपा नेतृ शशी श्रेष्ठले दाइ हाम्रो आन्दोलन छ भनेर जानकारी दिइन् । म पनि गएँ । रत्नपार्कमा थियो आन्दोलन । यस्सो हेर्छु त त्यो जुलुसमा म एक्लो पुरुष रहेछु । यसरी पटक-पटक स्टेज महिलाहरूको बीचमा एक्लो परेको छु ।
तर, सबैको आन्दोलनमा जानुको बेफाइदा पनि रहेछ । अमेरिका जान नपाएका ‘डीभी पीडित’ हरू एक दिन मेरो घरमा आए । केही दिनमा उनीहरूले अमेरिकन दुतावास अगाडि अनसन शुरु गरेछन् । जति अनसन बसे पनि उनीहरुको मागको कतैबाट सुनुवाइ भइरहेको थिएन । त्यसपछि अनसन तोड्ने निस्कर्षमा पुगेछन् । उनीहरूलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाउन म एक्लै त्यहाँ पुगेँ ।
त्योसम्म त ठीकै थियो । तर, एउटा ठिटोले अमेरिका जान नपाएको झोंकमा अमेरिकालाई तथानाम गाली गरे । परेन, फसाद Û एउटा मानवअधिकारवादी नेतालाई साथमा राखेर त्यो युवाले उच्चारणै गर्न नमिल्ने शब्द प्रयोग गरेर एकघण्टा भन्दा बढी धाराप्रवाह गाली गरे । मलाई त बसुँ कि भागौंजस्तो भयो । धेरै सरल हुनुको पनि बेफाइदा रहेछ ।
प्रचण्ड र बाबुरामको विवशता ?
युद्धकालमा माओवादीहरू राज्यपुनःसंरचना, समावेशिता, पहिचान जस्ता विषयमा व्यवस्थितरुपमै प्रस्तुत भएका थिए । जातीय मुक्ति मोर्चाहरू बनाए । नेवाः प्रदेश, मगरात घोषणा गरे । १० प्रदेशको कुरा अघि सारे ।
अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको भए आदिवासी जनजाति लगायतले अधिकार पाउँथे पनि भने । कसैकसैले त प्रचण्डले बेइमानी गरेको पनि भने । जनजाति, मधेशी आन्दोलनका साथीहरूले प्रचण्डले गद्दारी गरेको आरोप पनि लगाए ।
संविधानसभामा आउनु भनेको संसदीय प्रणालीमा आउनु थियो । जहाँ दुईतिहाई बहुमत नभई केही हुँदैनथ्यो । तर, त्यो भोट उहाँहरुसँग थिएन ।
संविधानसभा विघटन गरेको भनियो । तर, त्यो समयावधि सकिएर समाप्त भएको थियो । बाबुरामजीलाई सबैले दोष दिए । समय पुगेपछि विघटन भएको थियो ।
दोस्रो संविधानसभामा त माओवादीको शक्ति नै कमजोर भयो । त्यतिबेला पनि प्रचण्डजीले मलाई फोन गरेर समावेशीता र जनजाति अधिकारको विषय छोड्दिनँ भनेका थिए । हामी त ढुक्क भएर बसेका थियौं । विवशता थियो होला वा के थियो होला, सम्झौता गरेर उतातिर लाग्नुभयो ।
प्रचण्डले चाहेको भए अडान लिन सक्थेे भन्ने होला । अडान लिए पनि पर्याप्त सिट त उहाँसँग थिएन । एमालेको समर्थन चाहिन्थ्यो । पहिचान र समावेशिताको सवालमा एमाले अलि अनुदार थियो । संघीयताकै कुरा पनि समस्या थियो ।
आदिवासी जनजाति मात्रै होइन, अन्य धेरै-धेरै मुक्तकामी जनताहरूमा प्रचण्डजीप्रति ठूलो आशा थियो । अहिले पनि सार्वजनिक ठाउँमा बोल्दा उहाँ जनजाति, मधेसीको पक्ष वा पहिचानकै पक्षमा कुरा गर्नुहुन्छ ।
क्रान्ति सम्झौतामा टुङ्गियो । यो संसदीय व्यवस्था हो । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भए पनि कम्युनिष्ट व्यवस्था होइन । दुईतिहाई भए पनि धमाधम संविधान संशोधन गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरू ।
बाबुरामजीको दुईवटा सभामा मलाई पनि वक्ताका रुपमा बोलाएर गएको थिएँ । उहाँले धेरै मान्छे ल्याउनुभयो । तर व्यवस्थित गर्न सक्नुभएन । बाबुरामजी भेट्न आउँछु भन्नुभएको छ तर आउनु भएको छैन ।
प्रचण्डजीसँग एउटा कार्यक्रममा भेट भएको थियो । पहिलाको जस्तो स्थिति छैन । सल्लाह लिन आवश्यक नभएर पनि होला । जनजातिको कार्यक्रममा पनि मैले फोन गरेर धन्यवाद भनें । उहाँले दाइको घरमा आउँछु भन्नुभएको थियो । आधार इलाका तयार गर्ने बेलामा पनि मलाई सोध्नुभएको थियो । अहिले त्यस्तो स्थिति छैन ।
प्रचण्डले नमानेको एउटा कुरा
राज्यको नीति पहिलाको जस्तै छ । झण्डै अवस्था पञ्चायतकालकै ‘एक भाषा, एक भेष’ को नीतिजस्तै छ । गणतन्त्र घोषणा भए पनि भाषिक विभेद, जातीय विभेद, सांस्कृतिक विभेद जारी नै छ ।
सबै भाषामा सम्भव नभए पनि एक-एकवटा भाषामा विद्यालय खोले हुन्थ्यो । यो सरकारले पनि बहुभाषिक नीति ल्याउनुपर्दथ्यो । प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएका बेलामा उहाँ प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममा मैले रोएरै बहुभाषिक व्यवस्था हुनुपर्छ भनेँ । उहाँले गर्छु पनि भन्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभयो । त्यसपछि कहिल्यै सम्झनुभएन ।
अहिले पनि सम्झनुभएको भए त नेकपाको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ । शिक्षामन्त्री पनि उहाँकै निकट नेता हुनुहुन्छ । निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ । मसँग प्रचण्ड जतिसुकै नजिक भए पनि मेरो त्यो कुरा लागु भएन । एउटै कुरा दोहोर्‍याएर भन्ने मेरो स्वाभाव छैन ।
हालसालै माधव नेपाल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल छुट्टाछुट्टै मेरो घरमा आउनुभएको थियो । तर, राजनीतिको ‘र’ पनि कुरा गर्नुभएन । विष्णु पौडेलले मात्रै सोध्नुभयो, दाइको केही सल्लाह छ कि भनेर ।
ठूला कुरा त कति छन् कति, तत्काललाई बाटो मर्मत गर्नुस् भनें । त्यति गरे जनताले तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्नेछन् भनेँ ।
जनजातिकै आफ्नै कमजोरी
आदिवासी जनजातिहरूले सुस्त गतिमै भए पनि आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आन्दोलन गरिरहन्छ । जनजातिको माग पूरा नहुनुमा जनजातिकै पनि कमी कमजोरी छ । मेरै नेतृत्वमा पहिचान यात्रा भयो । कालो झण्डा, जुलुस, कोणसभा गरियो । तर, आन्दोलन उठाउन सकिएन । कमसेकम १०/२० हजारको जुलुस गर्न सकेको भए प्रभावशाली हुन्थ्यो होला ।
हामीले गर्न सक्ने भनेको डेलिगसन हो । तर, त्यस्तो डेलिगेसनमा जाँदा नेताहरू हुन्छ हुन्छ त भन्छन्, तर कार्यान्वयन गर्दैनन् । संसदमा भएका जनजातिहरु नबोल्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।
आन्दोलनका बेला राजधानीमा नेवारहरु हजारौंको संख्यामा आउँछन् भन्ने अन्य जनजातिको अपेक्षा हुन्छ । तर, त्यति सजिलै आन्दोलनमा आउँदैनन् । चन्दा संकलनमा जाँदा पनि लाखौं रुपैयाँ उठ्छ भन्छन् । म आफैं जाँदा पनि बढीमा सय रुपैयाँ दिन्छन् । धार्मिक, सामाजिक काममा भने करोडौं रुपैयाँ दिन्छन्, राजनीति र भाषाको आन्दोलनका लागि दिँदैनन् । पढेलेखका, बौद्धिक वर्गलाई नै यसमा चासो छैन ।अनलाइनखबरबाट |
२०७५ कार्तिक १८
« पहिचानवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरको निधन,प्रधानमन्त्रीद्वारा दुख व्यक्त (Previous News)
(Next News) कांग्रेसबाट बिजयी मेयरले रक्सीले मातेर लफडा गरेपछि युवाहरुले गरे रामधुलाई ! »